Bhekisela kwinqanaba lehashe lomfanekiso Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Bhekisela kwikota yefestile
Imibala yokubala ikhefu elihle lezingane zonke ubudala. Kwiwebhsayithi yethu uza kufumana iinjongo ezininzi ezahlukeneyo kwizihloko ezahlukeneyo. Bhekisela kwimifanekiso yecatshulwa ukuya kwelinye inyathelo.
Bhekisela kwipopasho yomfanekiso - ihashe
Kwisimboli-kuya-kwinqanaba, umntwana udibanisa amanqaku adibeneyo - ngokulandelelana okuchanekileyo - nge peneni. Ekugqibeleni, umntu owaziwayo okanye isidalwa siphuma. Umfanekiso obangelwayo unokuphindwa "njengomvuzo". Ukuchofoza umfanekiso uvula ithemplate kwifomati yefayili.
Phawula kwinqanaba lehashe lethemplate njengevulekileyo
Phawula kwipherethi yesimboli
Bhekisela kwisimboli somfanekiso wehlengethwa
Bhekisela kwikati yesikhokelo somfanekiso
Dot ukucacisa umfanekiso ongezantsi
Bhekisela kwenkomo yenkomo yenkcazelo
Iiddles - Bangaphi ama-triangles apha ...
Bhekisela kwimifanekiso yeenqaku kubantwana
Bhekisela kwintaka yeentaka
Faka uphawu kwiblueflyfly
Bhekisela kwindawo yebhokisi yethemplate
I-shadow izilwanyana ezilwanyana-ihashe